राष्ट्रपति दिल्लीमा, दिनभर के–के भयो ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
राष्ट्रपति दिल्लीमा, दिनभर के–के भयो ?
नयाँदिल्ली, ५ बैशाख -राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पाँचदिने राजकीय भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्ली आइपुगेकी छिन् । उनलाई दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका महिला तथा बालविकास राज्यमन्त्री कृष्णा राजले स्वागत गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिलाई कृष्णाबाहेक भारतीय विदेश मन्त्रालयको उत्तर डिभिजन हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेला र नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले स्वागत गरे । नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, नेपाली दूतावासका राजनीतिक काउन्सिलर हरि ओडारी पनि राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार राष्ट्रपति भवनमा दिवाभोजपछि भारतीय शीर्ष नेतासँग छलफल गरेकी छन् । शिष्टाचार भेटका लागि गएका भारतीय नेतासँग राष्ट्रपतिले स्थानीय निर्वाचनमार्फत नेपालले समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न लागेको बताइन् ।
सोमबार अपराह्न बाह्रखम्बारोडस्थित नेपाली दूतावासमा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन पनि उनले गरिन्, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।